40 + Ngwakọta Ngwa iji meziwanye Ahịa Onlinentanetị Gị
Ngwaọrụ 40, Ihe ngosi 40, Nkeji 40
Sundaybọchị Sọnde, Ọgọstụ 21, 2011 Tọzdee, Ọktoba 27, 2011 Douglas Karr
Tupu ọnwa a, enwere m oge dị egwu iji mee ihe ngosi Bọọgụ Indiana 2011. Nke a bụ ihe omume na-atọ ọchị n'ihi na ọ bụ nke kachasị na mpaghara ahụ ma enwere m ụfọdụ ịnwale ihe ọhụrụ. Ihe ngosi a bu ihe elebara anya na ihe ndi ahia na-efu site na iji ngwugwu nyocha ha iji meziwanye ahia ahia ha.
Arụ ọrụ njin nchọgharị, arụmọrụ mmekọrịta mmekọrịta, ịmata ụzọ na ịghọta omume onye ọrụ na ibe ma ọ bụ site na saịtị ahụ na-efu na nchịkọta. Nzuzo dika Google Analytics, n’uche nke m, kwesiri ibu obere ngwa-ahia nke ndi ahia ma abia n’inyocha na imezu usoro atumatu ahia. A bụ ihe ngosi tinyere a rundown nke dị iche iche ngwá ọrụ na echiche dị iche iche ha na-enye.
Enweghị oke ire ere… nke a bụ ihe kpatara m ji bụrụ nnukwu onye ofufe Webtrends. Mgbe m zutere ha afọ ole na ole gara aga, ha maara ihe na-eme na ụlọ ọrụ ahụ. N'akụkụ oke ndozi ha ugbu a nchịkọta n'elu ikpo okwu, ha gbasaa n'ike n'ike n'ime arụmọrụ-saịtị. Webtrends Social, Webtrends Apps, Webtrends Mobile, Webtrends Ads… Segmentation, Optimization, Real-analytics… otu ahụ na-enye ọtụtụ ngwaọrụ yana jikọtara ha nke ọma iji mee ka ọ dịkwuo mfe maka ndị na-ere ahịa ịzụlite atụmatụ ndị na-arụ.
Tags: elekọta mmadụ ibe edokọbara
Social Media Survey Na-ekwu ,: Ndị Nwe Sterịgogoro
Ihe Na-ewute Ndị Mmadụ Banyere Ozi ịntanetị
Aug 22, 2011 na 3: 49 AM
Ọ bụ nnukwu ngwugwu slide ma bụrụ nnukwu ngosi na Blog Indiana. Odi ka anyi no na nso otu anyi si eche banyere nyocha na mmesho.
Oh na ndo nwute ihe bit.ly bundle emeghị. Agaghị m ebi na aro ahụ.